विचार / ब्लग – Page2– अनलाइन खबर
खानेपानीको धारमा विषको गन्ध र मुहानमा विषादीको बोतल, पानीमा विष हालिएको अनुमान
No Comments on खानेपानीको धारमा विषको गन्ध र मुहानमा विषादीको बोतल, पानीमा विष हालिएको अनुमान
धादिङ । धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर–३, को कात्राक गाउँको खानेपानीको मुहानमा विष हालिएको शंका गरिएको छ । धारामा आएको पानी गन्ध आएपछि अनुसन्धानका क्रममा पानीको मुहानमा लारा ९९० नामको विषादीको बोतल भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायव उपरीक्षक रामबहादुर केसीले बताउनुभयो । स्थानीयबासिन्दा आत्तिएपछि वेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी र ३ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष भुवन त्रिपाठी तथा प्रहरी निरीक्षक सञ्जय तिमिल्सिनाको टोली घटनास्थलमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । पानीको गन्ध र देखिएको […]
को हुन् सद्दाम हुसेन ? जसले आफ्नै तीस लिटर रगतबाट कुरान लेखाएका थिए !
No Comments on को हुन् सद्दाम हुसेन ? जसले आफ्नै तीस लिटर रगतबाट कुरान लेखाएका थिए !
सद्दाम हुसेनलाई ठूला–ठूला महल मात्रै होइन, ठूला–ठूला मस्जित बनाउने पनि सोख थियो । उनले मध्य बगदादमा एउटा भव्य मस्जिद बनाएका थिए, जसलाई ‘उम्म अल मारीक’ नाम दिइएको थियो । सन् २००१ मा सद्दाम हुसेनको जन्मदिनका अवसरमा सद्दामले त्यो मस्जिद बनाएका थिए । मस्जिदको टुप्पो स्कड मिसाइलबाट बनाइएको थियो । यो त्यही मिसाइल थियो जुन अरब युद्धको समयमा इजरायलमा खसालिएको थियो । ‘अपरेसन डिजर्ट स्टोर्म’ नाम दिइएको त्यो मिसन ४३ दिनसम्म चलेको थियो । त्यसैको सम्झनास्वरुप मस्जिदको मिनारको उचाई […]
No Comments on इदलीबमा विद्यालय नजिकै हवाई आक्रमण, १६ कलिला छात्रछात्राको मृत्यु
बेरुत, लेबनान : सिरियाको उत्तरपश्चिमी शहर इदलीवमा बुधबार गरिएको हवाइ आक्रमणमा परी कम्तिमा १६ छात्रछात्रासहित २० जनाको निधन भएको सिरियाली मानव अधिकारवादी समूहले जनाएको छ । सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्युमन राइट्सले भनेको छ, “इदलीव प्रान्तको काफर बातिख क्षेत्रमा आक्रमणमा १६ जना बालबालिकासहित २० जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ ।” संस्थाका प्रमुख रामी अब्देल रहमानले भन्नुभयो, पूर्व अलकायदा समूहका धेरै सदस्य रहेको जिहादी विद्रोही समूह हायत तहरिर अल–सामद्वारा नियन्त्रणमा लिएको सुरक्षा जाँच चौकी नजिकै भएको आक्रमण सिरियाली सरकारी फौज […]
आलिया भट्ट सुटिङको क्रममा घाइते
No Comments on आलिया भट्ट सुटिङको क्रममा घाइते
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट सुटिङको क्रममा घाइते भएकी छन् । चलचित्र‘ब्रह्मास्त्र’को सेटमा एक्सन गर्नु पर्ने सिनमा उनी लडेर घाइते भएकी आलियाको दाहिने खुट्टा र पाखुरामा गम्भीर चोट लागेको छ । सो कारण उनलाई डाक्टरहरूले केही दिनको लागी आराम गर्ने सल्लाह दिएका छन् । आलिया घाइते भएसँगै चलचित्रको छायाङ्कन प्रभावित भएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेको छ । करण जोहार निर्देशीत चलचित्र १५ अगस्टको प्रदर्शनमा आउने बताइएको छ ।
No Comments on ओमानबाट आठ नेपाली कामदारको उद्धार
काठमाडौँ । ओमानमा अलपत्र परेका आठ नेपाली कामदारको उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ । मस्कट ओमान स्थित नेपाली राजदूतावासले ती कामदारलाई उद्धार गरी नेपाल पठाएको आज विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो । उद्धार गरिएकामा द्वारिकाप्रसाद चौधरी, रामु गिरी, राजकुमार तामाङ, देवबहादुर विक, ज्ञानबहादुर थापा, विक्रम राई, राजेन्द्र गिरी र तेजेन्द्र राना हुनुहुन्छ । ओमानको सोहारस्थित एक कम्पनीमा काम गर्न आएका कामदारले करार सम्झौताबमोजिमको सुविधा नपाएर अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्ने उजुरीका आधारमा दूतावासको पहलमा नेपाली कामदारलाई सकुशल स्वदेश फिर्ता गरिएको दूतावासले […]
साम्राज्ञी र आकाशको ‘तिमी सँग’को शिर्ष गीत रिलिज
No Comments on साम्राज्ञी र आकाशको ‘तिमी सँग’को शिर्ष गीत रिलिज
काठमाडौं । फिल्म ‘तिमीसँग’को शीर्ष गीत सार्वजनिक गरिएको छ । बुधवार राजधानीमा एक विशेष कार्यक्रम गर्दै फिल्मको गीत सार्वजनिक गरीएको हो । गीतमा मधुरा भट्टचार्य र राहुल मुखर्जीको स्वर रहेको छ भने राहुल मुखर्जीको सङ्गीत र लेखु सहयात्रीको शब्द समावेश छ । त्यस्तै गीतको भिडियोलाई शिशिर खातीले कोरियोग्राफी गरेका हुन् । भिडियोमा चलचित्रका मुख्य कलाकार साम्राज्ञी र आकाशलाई फिचर गरिएको छ । गीतलाई अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा खिचीएको हो । सार्वजनिक कार्यक्रममा फिल्मका लीड कलाकारहरू साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, नाजिर […]
No Comments on लाइसेन्स बिक्री गर्ने यातायात कार्यालयका कर्मचारी २ लाख धरौटीमा रिहा
काठमाडौं । नक्कली कागजातको आधारमा घुस लिएर विदेशका सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नेपालीकरण गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय बाग्मती सुकेधाराका प्रमुख सुन्दर भट्टराईसहित ४ जना धरौटीमा रिहा भएका छन्। विशेष अदालतले कार्यालय प्रमुख भट्टराई, शाखा अधिकृत यामलाल ढकाल र नायव सुब्बा यादव पौडेललाई जनही २ लाख धरौटीमा रिहा गरेको हो। भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका लेखापढी गर्ने राजु सेढाईं भने ८० हजार धरौटीमा छुटेका छन्। ५० लाख ४ हजार ८ सय ५० रुपैयाँमा विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले […]
काठमाडौं महानगरपालिकाको गेट नजिकको भवनमा आगलागी
No Comments on काठमाडौं महानगरपालिकाको गेट नजिकको भवनमा आगलागी
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाको गेट नजीकैको भवनमा आगलागी भएको छ । सालीमर होटल रहेको भवनको अन्डरग्राउन्डबाट आगलागी भएको हो । एकजना घाइतेको उद्धार गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयकाले जनाए। करिब १०र१५ जना मानिस फसेको हुनसक्ने पनि प्रहरीले अनुमान गरेको छ। आगो निभाउन दमकलसहित सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासी खटिरहेका छन्।
No Comments on एक किशोरीलाई १२ दिनसम्म बलात्कार गर्ने पाँच जना पक्राउ
काठमाडौं। पन्ध्र वर्षीया किशोरीलाई बन्धक बनाई १२ दिनसम्म सामुहिक बलात्कार गरेको आरोपमा पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । बा २ ख ४५९५ नम्बरको गाडीमा चढेर फागुन १७ गते कीर्तिपुरबाट बल्खु आउन लागेकी बौद्धिक अपाङ किशोरीलाई सोही गाडीका चालक र सह–चालकले बलात्कार गरेका थिए । उनीहरुले किशोरीलाई गोदावरीस्थित कोठामा लगेर ६ दिनसम्म बन्धक बनाइ पटक–पटक बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । फागुन २४ गते भागेकी किशोरीलाई पुनः नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुले फागुन २७ गते अर्को समूहलाई जिम्मा […]
No Comments on सुगम बमको बयानः ‘मैले प्रहरीहरुलाई कुटेको छैन बरु मलाई भ्यानको पछाडि बुटैबुटले कुटे’ (भिडियोसहित)
सरद राई, सुगम बमको बयानः ‘मैले प्रहरीहरुलाई कुटेको छैन बरु मलाई भ्यानको पछाडि बुटैबुटले कुटे’ राजधानीको ठमेलबाट प्रहरीलाई कुटपिट गरेको अभियोगमा प्रहरीले २५ वर्षीय सुगम बमलाई पक्राउ गरेको थियो । यो समाचार विभिन्न अनलाईन मिडियाहरुमा आएपछि पिडित सुगम बम हाम्रै कार्यलयमा आएका छन् भने सम्प्रेसश गरिएको सो समाचार झुठो रहेको बताएका छन् । सुगम बम आफ्नो साथिहरुसँग फ्राईडे नाइट मनाएर घर फर्किने क्रममा प्रहरीले आफुलाई हात पात गरेको बताउँदै भने, ‘मेरो साथिहरुसँग फ्राइडे नाइट मनाएर घर फर्कदैँ गर्दा […]